Coronavirus ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေရန် သမ္မတ Joe Biden အမိန့်ပေး – King Of Future
Coronavirus ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေရန် သမ္မတ Joe Biden အမိန့်ပေး
71 Comments	/ News / By codexmyanmar
သမျမတ Joe Biden သညြ ဗိုငြးရပဈြ၏ မူလအစ အဖှမွေားကို ရှာဖှရနြေ COVID-19 ကို ဖှဈပေါစြသညေ့ြ စဈ ဆေးခကွြ မွားရှာဖှရနေအြမိန့ပြေးခဲ့ပါတယြ။
– ထောကလြှမြးရေးအဂငွေစြီမွားသညြ ဖှဈနိုငခြှမွေားကိုစဉြးစားနသေောလြညြး ၎င်းငျးငြးတို၏ကောကခြကွခြမွှုအပေါြ ယုံကှညမြှုကငြးမဲ့နဆေဲဖှဈပါတယြ။
– သမျမတ၏ စာတှငြ ဖောပြှထားခကွအြရ coronavirus သညကြူးစကခြံထားရသောတိရိဈဆာနနြှင့လြူတိုထိတှေ့မှုမှဖှဈစေ၊ ဓာတခြှဲခနြးမတောတြဆမှုမှဖှဈစပေေါပြေါကလြာခှငြးရှိမရှိ အသေးစိတကြို မတလြကသူ၏အဖှဲအားမေးမှနြးခဲ့ပါတယြ။
– ဗိုငြးရပဈြသညြ သဘာဝမဟုတဘြဲ တရုတသြုတသနေဓာတခြှဲခနြးမှထှကပြေါလြာခှငြးဖှဈနိုငသြညြ ဟူသောသီအိုရီတဈခုကိုလညြးယုံကှညနြပေါတယြ။
– အမရေိကနပြှညထြောငစြုရှိ တရုတသြံရုံးက ဒီကိဈစကိုနိုငငြံရေးအရ COVID-19 ၏မူလအစနှင့ြ ပတသြကြ၍ စုံစမြးစဈဆေးမှုမွားသညြ နှောင့နြှေးစလေိမ့မြညဟြုကှာသပတေးနေ့တှငပြှောကှားခဲ့ပါတယြ။
– တရုတနြိုငငြံအနဖှငေ့ြ ကမျဘာတဝှမြးရှိ COVID-19 ဖှဈပှားမှုမွားအားလုံးကို ပှည့ပြှည့စြုံစုံလေ့လာရနနြှင့ြ ကမျဘာတဝှမြးရှိ ဇီဝဗဒဆေိုငရြာဓာတခြှဲခနြးအခွိုကို စေ့စေ့စပစြပြ စုံစမြးစဈဆေးမှုမွားပှုလုပရြနြ ထောကခြံကှောငြး၎င်းငျးငြး၏သံတမနကြပှောကှားခဲ့ပါတယြ။
– Covid-19 ရောဂါသညြ ကမျဘာအနှံရှိ လူ ဦး ရေ3သနြးကွောကြို သဆေုံးစခေဲ့ပှီး ကမျဘာအနှံအပှားတှငြ စီးပှားရေးကဆွငြးမှု မွား ဖှဈပေါစြခေဲ့ပါတယြ။
– တရုတသြိပျပံပညာရှငမြွားဦးဆောငသြော ကမျဘာ့ကနွြးမာရေးအဖှဲက ဗိုငြးရပဈြသညအြခှားတိရဈဆာနမြွားမှတဈဆင့ြ လငြးနိုမွားမှလူသို ကူးစကခြှငြးဖှဈနိုငကြှောငြးပှောကှားခဲ့ပါတယြ။ ဓာတခြှဲခနြးအဖှဈအပကွမြှတဈဆင့ြ အဖှရှော ခှငြးသညြ မဖှဈနိုငလြောကသြောလမြးဟု ယူဆ နကှပေါတယြ။
– အမရေိကနအြထကလြှှတတြောနြှင့အြောကလြှှတတြောရြှိ ထောကလြှမြးရေးကောမြတီမွားသညြ အမရေိကနပြှညထြောငစြုအဂငွေစြီမွားက COVID-19 ၏မူလအစ၊ သတငြးပွံ့နှံပုံနှင့အြစိုးရမွားကမညသြိုတုန့ပြှနခြဲ့ကှောငြး နှင့ြ သတငြးအခကွအြလကမြွားကို မညသြိုကောကယြူစုဆောငြးသညကြို စုံစမြးစဈဆေးလကွရြှိပါတယြ။
– ယခုလအစောပိုငြးက Republican မွားကထုတပြှနခြဲ့သည့အြစီရငခြံစာတှငြ အထူးသဖှင့ြ ဝူဟနဗြိုငြးရပဈြပိုးဆိုငရြာဌာနကို အထူးအာရုံစိုကခြဲ့ပါတယြ။
– COVID-19 ၏မူလအစနှင့ြ ပတသြကြ၍ စုံစမြးစဈဆေးမှုတှငြ ဒုတိယအ ကှိမြ စဈဆေးရနြ WHO ကို ဝါရှငတြနကြ တောငြးဆိုလိုကပြါတယြ။
– WHO မှအရေးပေါညြှှနကြှားရေးမှူး Mike Ryan က အဂငွေစြီသညြ လာမည့သြီတငြးပတမြွားအတှငြး အဆိုပှုထားသည့အြဆင့မြွားနှင့ြ ပတသြကြ၍ နောကဆြုံးသတငြးကို တငပြှရနြ မွှောလြင့ကြှောငြး ပှောကှားခဲ့ပါတယြ။
– WHO မှ ကိုယစြားလှယမြွားက ဗိုငြးရပဈြ၏ မူလအစကိုခှရောခံရနြ WHO ၏ကှိုးပမြးမှုမွားနှင့ြ ပူးပေါငြး၍ ပှင့လြငြးမှငသြာသောသဘောထားမွားကို ကငွ့သြုံးရနြ တောငြးဆိုလိုကသြညဟြု အငြျဂါနေ့ကပှောကှားခဲ့ပါတယြ။
ကမျဘာ့ရှှေ,ငှေ,ဒေါလြာငှကှေေးဈေးကှကတြိုတှငြ အရောငြးအဝယြ ပှုလုပရြနြ လေ့လာလိုပါက အောကပြါLinkကို Joinထား ပါ.
#Forexmarket #Stoctmarket #Biden #Coronavirus #WHO #Covid-19
71 thoughts on “Coronavirus ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေရန် သမ္မတ Joe Biden အမိန့်ပေး”
ivermectin 2ml generic stromectol – order stromectol
Обратной стороной игры является система «укажи и щелкни», которая возвращает меня на 30 лет назад, когда разработчик только начал писать код. Тем не менее, сюжет и сцены секса действительно хорошо уравновешивают этот недостаток, благодаря чему игра заняла заслуженное 5-е место в нашем рейтинге. https://forum.firealarm.com/community/profile/vadabalke993305/ Категории Сюжетное русское порно онлайн Хорошая девочка (2015) Отец сочно пердолит дочку в волосатую письку на кухонном столе Если вы хотя бы раз видели sex brazzers 2021 в хорошем качестве full hd, то вы наверняка понимаете, что это такое, когда сестра застает своего брата за сексом со своей лучшей подругой и вместо того, чтобы выпроводить их из своего жилища, присоединяется к этому жаркому пореву, совершая тем самым самый ебливый инцест.
Let’s remember, they areaSpain international who scoredahat-trick against Germany this season, the Brazil number nine and an England star who scored 31 ties last season. Current Chelsea squad is: UEFA Champions League Round of 16–Parc des Princes, Paris Chelsea did what they do under Tuchel in Europe. Few teams are better at keeping possession. But in Turin they did precious little with it. Once Juventus plugged the early holes Marcos Alonso kept finding down their right flank, the visitors struggled to find any real thoroughfare towards goal. Chelsea lead Manchester City 1-0 at half-time. Kai Havertz is the first player to score his first UEFA Champions League goal inafinal since Д°lkay GГјndoДџan in 2013. Meanwhile, Mason Mount is the first English player to provide an assist inaUCL final since Wes Brown in 2008. https://lobsterklaw.com/community/profile/cheryl86141099/ Crystal Palace (H) | Portman Road | Saturday, 24 July | 3pm During the last6meetings, Union Omaha SC have won5times, there have been0draws while FC Tucson have won 1 times. The goal difference is 8-4 in favour of Union Omaha SC. England vs Albania 2021: TV coverage of football World Cup qualifier – channel, live stream and kick off time League One Sunderland nearly drew level in the first minute of second-half stoppage time but Dan Neil, who earned his first call-up to the England U20 squad this week, could only cringe as his half-volley hit the woodwork. Joshua Tracey Follow the results of the matches Valencia (Sakh) – Lokomotiv Moscow (FC Legenda). Football online, tournament tables of FIFA. LigaPro, schedule of matches of FIFA. LigaPro on fscore-bd.com
фильмя кинопроизводство fil’mya korotkometrazhka мелодрама фильм sinematograf kinokomediya киноискусство kinolenta https://bit.ly/chinovnik-film-2021-kino КИНО